SlideDog: Faịlị Ugbu a na-enweghị nsogbu | Martech Zone
SlideDog: Faịlị Na - eweta Seamlessly
Satọdee, Nọvemba 24, 2012 Fraịdee, Nọvemba 23, 2012 Douglas Karr
Amaghị m na ọ bụla ahịa ọkachamara na-adịghị rapaara n'ihu a ìgwè mmadụ ma ọ bụ ihe dị mkpa boardroom naanị nwere mbipụta na ha ngosi na-arụ ọrụ. Slideog na-atụ anya ịkwụsị nke a site na ịnye ngwa nke na-ewuli Powerpoints gị, PDFs, nkwupụta Prezi, ihe nkiri sịnịma na ọbụnadị ibe weebụ na ngwa anọghị n'ịntanetị ị nwedịrị ike igwu site na eriri USB! Nokwaghị echegbu onwe gị gbasara njikọta, ngbanwe ngwa, ma ọ bụ ọbụnadị igosipụta na laptọọpụ ọzọ.
Ndetuta egwu ọkpụkpọ - Slidedog na-enye gị ohere ịmepụta listi ọkpụkpọ maka mgbasa ozi gị niile. Naanị dọrọ faịlụ gị na Slidedog, dozie ha n'usoro ịchọrọ, ị ga-aga. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ihe ị ga-egosipụta, ma ọ bụ ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ndị na-ekwu okwu, Slidedog na-ewepụ nsogbu nke ịtọ ntọala gị.
Na-akwado Ihe niile - Slidedog na-akwado mgbasa ozi ngosi niile a na-ahụkarị. Naanị ihe ọ bụla sitere na PowerPoints, PDF ma ọ bụ Prezis na ụdị vidiyo ma ọ bụ foto ọ bụla. I nwedịrị ike iji ya gosi ndị na-ege gị ntị ọdịnaya weebụ. Ọ na-agba site na eriri USB na-enweghị ntinye ọ bụla.
Enweghị nsogbu switches - Slidedog ejiri ịmafe n'etiti faịlụ ngosi gị. Ozugbo ịpịrị mmalite, faịlụ niile na-ebu ibu ma dị njikere, na ntụgharị site na otu faịlụ gaa na nke ọzọ na-eme n'enweghị nsogbu. I nwedịrị ike ịhapụ ịga n'ihu ma ọ bụrụ na ị na-agba obere oge ma ọ bụ laghachi na ịlele faịlụ ọzọ. Agaghị na-elegharị anya na folda gị na ogbo ma ọ bụ na-adọpụ ndị na-ege ntị anya site na desktọọpụ ndị rụrụ arụ.
Zuru oke playback - Slidedog na-enye gị ohere ịmepụta listi ọkpụkpọ maka mgbasa ozi gị niile. Naanị dọrọ faịlụ gị na Slidedog, dozie ha n'usoro ịchọrọ, ị ga-aga. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ihe ị ga-egosipụta, ma ọ bụ ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ ndị na-ekwu okwu, Slidedog na-ewepụ nsogbu nke ịtọ ntọala gị.
Ihe ndị dị mkpa dị n’aka onye dị mkpa - Slidedog ahaziri maka ojiji na sọrọ ngosipụta. Ọ na atụmatụ a iche iche A ngosi ihuenyo na gị playlist, ngụ oge na A ngosi ndetu. Nke ahụ pụtara na ị na-achịkwa ya mgbe niile, ebe ndị na-ege gị ntị na-ahụ naanị ihe ịchọrọ ka ha hụ.
Slidedog dị ugbu a naanị maka Windows. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Mac, gbaa mbọ debanye aha na ha download page ka ha mara na ha mkpa ha na-na a version maka Mac!
Tags: pdfpowerpointihe ngosikwadoroihe ngosi ahiaslidog
Successzọ ịga nke ọma n'ịntanetị
Tinye Dezie-Na-Ebe ọ bụla Ọdịnaya Management System